Nicolas Berlanga oo eedeeyay heshiiska Somalia iyo Cabdirashiid Janan
Home WARARKA Nicolas Berlanga oo eedeeyay heshiiska Somalia iyo Cabdirashiid Janan
Muqdisho, March 25, 2021 (Berberanews)-Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlanga, ayaa heshiiska dowladda Soomaaliya ay la gashay Cabdirashiid Janan ku tilmaamay mid waxyeelo ku ah dhibbanayaashii ku waxyeeloobay iyo kuwii ku barakacay colaadihii uu qeybta ka ahaaa.
“Waxaan hubaa kuwa ku fikiraya guulaha muddada gaaban inaanay iloobi doonin bulsho u baahan tiirar adag si mustaqbalka loo dhiso,” ayuu hadalkiisa ku sheegay.
Agaasime ku xigeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka falcelinayay hadalka Nicolas Berlanda, ayaa sheegay in safiirku heli karay marino diblomaasiyadeed oo ku haboon tabashooyinka nuucaan oo kale ah, si uu helo aragtiyo qiimo leh.
Dhinaca kale hay’adda u doodda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa dalbatay in baaris lagu sameeyo tacadiyadda lala xidhiidhinayo Janan ee ka dhacay Gedo.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo tacsi u diray ciidanka iyo ehladii Marxuum Rujiye
Next articleQoomiyadda Afrikaanka ah ee haweenay boqoradda ka dhigatay